အိပ်ပျော်နေရာမှ တစ်ခုခုကြောင့် ရုတ်တရက် ထလိုက်ခြင်းဟာ ဘယ်လောက်ထိ ကြောက်စရာကောင်းလဲ ဆိုတာ – Askstyle
အိပ်ပျော်နေရာမှ တစ်ခုခုကြောင့် ရုတ်တရက် ထလိုက်ခြင်းဟာ ဘယ်လောက်ထိ ကြောက်စရာကောင်းလဲ ဆိုတာ
အိပ်ပျော်နေပြီးမှ ရုတ်တရက် ထလိုက်ခြင်းဟာ လူကိုသေစေနိုင်တယ်ဆိုတာ (အိပ်ယာအထမှာလိုက်နာစရာ) အိပ်နေရင်းဘာလို့ သေကြတာလဲ?
အားလုံး အတွက်​ အ​ရေးကြီးလို့ မိတ်​​ဆွေ ဆရာဝန်​တစ်​​ယောက်​ ​ပြောပြထားတဲ့ ​ဟောဒီအချက်​​လေးကို သတိထားကြဖို့ မျှဝေပါရ​စေ။
ည ည အိပ်​​ပျော်​ ​နေရာက ဆီးသွားချင်စိတ်ကြောင့်​ နိုးလို့ ဘဲဖြစ်​ဖြစ်​ နံနက်​​စော​စော အိပ်​ရာ အထမှာ ဖြစ်​ဖြစ်​ လူတိုင်း မိနစ်​ဝက်​ သုံးကြီမ်​ သတိထား ခြင်းဖြင့်​ ရုတ်​တရက်​ ​သေဆုံးမှု များစွာ ​လျော့ပါး မှာပါ။
သာမာန်​အားဖြင့်​ ကျန်းမာ​ရေး​ ကောင်းတယ်​ လို့ ထင်​ရတဲ့ သူတစ်​​ယောက်​​ ညက ကွယ်​လွန်​ သွားပြီ ဆိုတာမျိုး၊ ဟင်​’ မ​နေ့က ဘဲ ​ဖေ့စ်​ဘွတ်​ မက်​စင်​ဂျာ က​နေ စကား​ပြောလိုက်​​ရသေး ခု ရုတ်​တရက်​ ​သေဆုံးပြီ ဆိုတာ မျိုး​တွေ မကြာမကြာ ကြားကြား​ နေရတာ ဘာ​ကြောင့့်​ပါလဲ ၊
အ​ကြောင်းက​တော့ ညမှာ အ​ပေါ့စွန့်​ဘို့ အိပ်​ရာ က အ​လောသုံးဆယ်​ အထ မှာ ဦး​နှောက်​ကို​ သွေးပို့မှု နည်းသွားလို့ပါ။
ညလည်​ လောက်​ ဆီးသွားချင်​လို့ နိုးရုံ​လေးနဲ့ နှလုံးသားလျှပ်​စီးမှုပြ​ ကောက်​​ကြောင်း ပုံစံ-ECG pattern ​ပြောင်းလဲပါပြီ၊ ဒီအထဲ ဝရုန်းသုန်းကား အမြန်​ထလိုက်​ဦးမယ်​ ဆိုရင်​ ဖြင့်​ ဦး​နှောက်မှာ ​သွေးနီအား နည်းပြီး နှလုံးသားရဲ့ ခုတ်​ညှစ်​မှု စွမ်းအား ပျက်​ပြားသွားတတ်​ပါတယ်​ ။
(ဦး​နှောက်​ထဲမှာ နှလုံးခုန်​မှုကို ထိန်းညှိတဲ့ ဦးစီးဌာန ရှိ​နေပါတယ်​ Cardiac Certer, Vasomotor Center etc )
လိုက်​နာရမယ့် မိနစ်​ဝက်​ သုံးကြိမ်​
ဘယ်​အ​ကြောင်း​ကြောင့်​ဘဲ နိုး နိုး၊ နိုး နိုး ချင်း အိပ်​ရာ က အ​မျောအ​မော အ​လောသုံးဆယ်​ မထလိုက်​ပါနဲ့၊ ဒီအချက်​ သုံးချက်​ကိုဖြင့်​ နှလုံးသွင်း ဖြစ်​​အောင်​ သွင်းလိုက်​ပါ။
၁- ပထမ မိနစ်​ဝက်​ အိပ်​​ပျော်​​နေရာက နိုးနိုးချင်း မိနစ်​ဝက်​ အိပ်​ရာထဲမှာ ဆက်​ပြီ လဲ​လျောင်း​နေပါဦး။
၂- ဒုတိယ မိနစ်​ဝက်​ အိပ်​ရာပေါ်မှာဘဲ မိနစ်​ဝက်​ ထိုင်​ပါ။
၃- ​တတိယ မိနစ်​ဝက်​ အိပ်​ရာအစွန်းမှာ ထိုင်​လျက်​ ​ခြေနှစ်​ဖက်​ အိပ်​ရာဘေးသို့ တွဲ​လျောင်း ချပါ။
ဤနည်းဖြင့်​ အိပ်​ရာက အထမှာ လဲကျ လိမ့့်​ကျပြီး ဦး​နှောက်​​သွေးအားနည်းခြင်း၊ တနည်းအားဖြင့်​ ​အောက်​ဆီဂျင်​​ ရရှိမှု လျော့နည်းခြင်း မဖြစ်​​တော့ဘဲ နှလုံးကြွက်​သား ခုတ်​ညှစ်​မှု စွမ်းအား ပျက်​ပြားကာ ရုတ်​တရက်​ ​သေဆုံမှုမျိုး မဖြစ်​နိုင်​​တော့ပါ..။
ဒါကြောင့်​ ဒီအချက်​ အ​ကြောင်းအရာ ကို မိမိ မိသားစုဝင်​များ၊ မိတ်​​ဆွေများ၊ ချစ်​အပ်​ ခင်အပ်​​သူများအား အသိ​ပေး မျှ​ဝေပါ၊ နိုးကြား​စေပါ၊ ကြီးကြီး ငယ်​ငယ်​ ရွယ်​ရွယ်​ လတ်​လတ်​ အသက်​အရွယ်​မ​ရွေး ဒီအ​ခြေအ​နေဆိုး​တွေ ဖြစ်​တတ်​ပါတယ်​၊ မျှဝေတယ်​ ဆိုတာ အ​လေးထားခြင်းဘဲ မဟုတ်​ပါလား၊ သိပြီသား ဆိုလဲ အသစ်​ အသစ်​လို သ​ဘောထား ပြီးလိုက်​နာ ကျင့်​​ဆောင်​ပါ​လေ​လော့။
အိပျပြျော နရောမှ ရုတျတရကျ ထလိုကျခွငျးဟာ ဘယျလောကျကွောကျစရာကောငျးလဲ ဆိုတာ… (အိပျယာအထမှာလိုကျနာစရာ)
အိပျပြျောနပွေီးမှ ရုတျတရကျ ထလိုကျခွငျးဟာ လူကိုသစေနေိုငျတယျဆိုတာ (အိပျယာအထမှာလိုကျနာစရာ) အိပျနရေငျးဘာလို့ သကွေတာလဲ?
အားလုံး အတှကျ အရေးကွီးလို့ မိတျဆှေ ဆရာဝနျတဈယောကျ ပွောပွထားတဲ့ ဟောဒီအခကျြလေးကို သတိထားကွဖို့ မြှဝပေါရစေ။
ည ည အိပျပြျော နရောက ဆီးသှားခငျြစိတျကွောငျ့ နိုးလို့ ဘဲဖွဈဖွဈ နံနကျစောစော အိပျရာ အထမှာ ဖွဈဖွဈ လူတိုငျး မိနဈဝကျ သုံးကွီမျ သတိထား ခွငျးဖွငျ့ ရုတျတရကျ သဆေုံးမှု မြားစှာ လြော့ပါး မှာပါ။
သာမာနျအားဖွငျ့ ကနျြးမာရေး ကောငျးတယျ လို့ ထငျရတဲ့ သူတဈယောကျ ညက ကှယျလှနျ သှားပွီ ဆိုတာမြိုး၊ ဟငျ’ မနကေ့ ဘဲ ဖစျေ့ဘှတျ မကျစငျဂြာ ကနေ စကားပွောလိုကျရသေး ခု ရုတျတရကျ သဆေုံးပွီ ဆိုတာ မြိုးတှေ မကွာမကွာ ကွားကွား နရေတာ ဘာကွောငျ့ပါလဲ ၊
အကွောငျးကတော့ ညမှာ အပေါ့စှနျ့ဘို့ အိပျရာ က အလောသုံးဆယျ အထ မှာ ဦးနှောကျကို သှေးပို့မှု နညျးသှားလို့ပါ။
ညလညျ လောကျ ဆီးသှားခငျြလို့ နိုးရုံလေးနဲ့ နှလုံးသားလြှပျစီးမှုပွ ကောကျကွောငျး ပုံစံ-ECG pattern ပွောငျးလဲပါပွီ၊ ဒီအထဲ ဝရုနျးသုနျးကား အမွနျထလိုကျဦးမယျ ဆိုရငျ ဖွငျ့ ဦးနှောကျမှာ သှေးနီအား နညျးပွီး နှလုံးသားရဲ့ ခုတျညှဈမှု စှမျးအား ပကျြပွားသှားတတျပါတယျ ။
(ဦးနှောကျထဲမှာ နှလုံးခုနျမှုကို ထိနျးညှိတဲ့ ဦးစီးဌာန ရှိနပေါတယျ Cardiac Certer, Vasomotor Center etc )
လိုကျနာရမယျ့ မိနဈဝကျ သုံးကွိမျ
ဘယျအကွောငျးကွောငျ့ဘဲ နိုး နိုး၊ နိုး နိုး ခငျြး အိပျရာ က အမြောအမော အလောသုံးဆယျ မထလိုကျပါနဲ့၊ ဒီအခကျြ သုံးခကျြကိုဖွငျ့ နှလုံးသှငျး ဖွဈအောငျ သှငျးလိုကျပါ။
၁- ပထမ မိနဈဝကျ အိပျပြျောနရောက နိုးနိုးခငျြး မိနဈဝကျ အိပျရာထဲမှာ ဆကျပွီ လဲလြောငျးနပေါဦး။
၂- ဒုတိယ မိနဈဝကျ အိပျရာပျေါမှာဘဲ မိနဈဝကျ ထိုငျပါ။
၃- တတိယ မိနဈဝကျ အိပျရာအစှနျးမှာ ထိုငျလကျြ ခွနှေဈဖကျ အိပျရာဘေးသို့ တှဲလြောငျး ခပြါ။
ဤနညျးဖွငျ့ အိပျရာက အထမှာ လဲကြ လိမျ့ကပြွီး ဦးနှောကျသှေးအားနညျးခွငျး၊ တနညျးအားဖွငျ့ အောကျဆီဂငျြ ရရှိမှု လြော့နညျးခွငျး မဖွဈတော့ဘဲ နှလုံးကွှကျသား ခုတျညှဈမှု စှမျးအား ပကျြပွားကာ ရုတျတရကျ သဆေုံမှုမြိုး မဖွဈနိုငျတော့ပါ..။
ဒါကွောငျ့ ဒီအခကျြ အကွောငျးအရာ ကို မိမိ မိသားစုဝငျမြား၊ မိတျဆှမြေား၊ ခဈြအပျ ခငျအပျသူမြားအား အသိပေး မြှဝပေါ၊ နိုးကွားစပေါ၊ ကွီးကွီး ငယျငယျ ရှယျရှယျ လတျလတျ အသကျအရှယျမရှေး ဒီအခွအေနဆေိုးတှေ ဖွဈတတျပါတယျ၊ မြှဝတေယျ ဆိုတာ အလေးထားခွငျးဘဲ မဟုတျပါလား၊ သိပွီသား ဆိုလဲ အသဈ အသဈလို သဘောထား ပွီးလိုကျနာ ကငျြ့ဆောငျပါလလေော့။